Abenzi Bokuzenzakalela Basekhaya | I-China Home Automation Factory & Abahlinzeki
Uhlelo lwezimpawu zomnyango zedijithali
Le iphrojekthi yomhlangano we-PCB wohlelo lwezimpawu zomnyango wedijithali. Uphawu lomnyango wedijithali lubekwe ngaphandle komnyango wefulethi ezitebhisini. Izitebhisi azigcini nje ngokuba netimu engaguquguquki, kepha ukumakwa kwegama lapho kuhamba kuyasiza kakhulu lapho konke ukumakwa kwamagama kungaphathwa ngqo kwi-inthanethi.
Le iphrojekthi yenhlangano ye-PCB yohlelo lwesiteshi somnyango. Thina, ePandawill, singochwepheshe bezinsizakalo zokukhiqiza izindlu ezihlakaniphile. Ngenxa yezimboni zethu ezihlakaniphile, onjiniyela nemishini yethu basebenzisa ukuhlaziywa kwedatha okukhulu, ukusebenzisa amafu, ubuhlakani bokufakelwa (i-AI) nokuphrinta kwe-3D ukudala amadivayisi axhumene ne-smart home.
Kusuka ekukhiqizeni nasekukhiqizeni ibhodi le-PCB kuya ezinsizakalweni ze-NPI kanye nezixazululo zomkhiqizo wokugcina wokugcina, amafektri ethu ahlakaniphile angaletha izixazululo zokuthengwa okuhlakaniphile kumakhasimende ethu, kuwo wonke amadivayisi abo asekhaya ahlakaniphile.
Uhlelo lokubonisa lwe-LED
Le iphrojekthi yomhlangano we-PCB wohlelo lokulawula ukubonisa i-LED. Thina, ePandawill, singochwepheshe bezinsizakalo zokukhiqiza izindlu ezihlakaniphile. Ngenxa yamafektri ethu ahlakaniphile, onjiniyela nemishini yethu basebenzisa ukuhlaziywa kwedatha okukhulu, ukusebenzisa amafu, ubuhlakani bokufakelwa (i-AI) nokuphrinta kwe-3D ukudala amadivayisi axhunyiwe we-smart home.